Vatungamiri veNyika dzemuAfrica Vanoungana muZambia Vachichema VaKenneth Kaunda
Chikunguru 02, 2021
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nhasi vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika muZambia pavanga vachichema vaimbova mutungamiri wenyika iyi VaKenneth Kaunda.
Vachitaura kuLusaka Showgrounds uko kwaungana vatungamiri venyika dzakawanda vachichema VaKaunda, VaMnangagwa vatsanangura VaKaunda semunhu aida budiriro, runyararo pamwe nekubatana muAfrica.
Vachitaurawo parufu urwu, mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, vati nyika yavo ingadai isina kusununguka kubva kuhutongi hwehudzvanyiriri hwevechichena dai pasina kuchengetwa kwakaitwa vaitungamirira hondo yekurwisa apartheid muSouth Africa.
Sachigaro wesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community, SADC, uye vari mutungamiri weMozambique, VaPhillipe Nyusi, vati nekuda kwekuti VaKaunda vakamira nenyika dzemu Africa dzakawanda kuti dziwane rusununguko, Zambia ndiyo yakabhadhara mutengo wehondo dzose dzairwiwa munyika zhinji dzemu Africa uye vaikurudzira kuti munyika dzose dzemuAfrica muve nerunyararo nguva dzose.
Vachitenda vatungamiri vedzimwe nyika vanga vari parufu apa, mutungamiri weZambia, VaEdgar Lungu, vatsanangura VaKaunda semunhu akashanda zvikuru kuti vanhu vazhinji muZambia vawane dzidzo uye vakashandawo zvakasimba kurwisana nechirwere cheHiv/Aids.
Vatiwo VaKaunda vaiva munhu ane rudo uye aida zvemitambo nekuimba vachiti VaKaunda vaisadawo zvakare kuti hupfumi hwemuAfrica hutorwe nevabvakure.
Mutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, vaturawo mashoko ekuchema VaKaunda vari muHarare vachiti kusiyawo basa kwakaita VaKaunda mushure mekukundwa kwavakaitwa sarudzo naVaFredrick Chiluba muna 1991, kunoratidza kuti ushe madzoro.
Zvinonzi pane kusawirira pakati pemhuri yaVaKaunda nehurumende yaZambia pamusoro pekuti VaKaunda vachavigwa kupi.
Zvinonzi mhuri yaVaKaunda iri kuda kuti vavigwe papurazi ravo parutivi pemudzimai wavo Betty uyo wavakagara naye kwemakore makumi matanhatu nematanhatu ukuwo hurumende ichinzi iri kuda kuti VaKaunda vavigwe pa Embassy Park muLusaka.
VaKaunda, avo vakave mutungamiri weZambia wekutanga kubva nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere muna 1964, vakazvarwa musi Kubvumbi 28 muna 1924 vakashaya svondo rapera vave nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe uye vakatarisira kuvigwa musi wa Chikunguru 7.